Khayaanada maalinta | Martech Zone
Jimco, Febraayo 23, 2007 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Xitaa aniga oo leh dhammaan shaandhooyinka SPAM ee adduunka, weli waxaan helaa SPAM. Waan necbahay SPAM, laakiin waa inaan qiraa mid ka mid ah waxyaabaha aan ku faraxsanahay ee dambiyadayda ah anigoo ku dhex sawiraya SPAM, waxaan u muuqdaa inaan qaar akhristo. Waxaan si dhakhso leh u baaraa iyaga si aan isugu dayo inaan u aqoonsado waxyaabaha ay qabteen shaandhada oo ahayd faallooyin sax ah Markasta inyar, in kastoo, waxaan iskaanbaaraa wax yar oo jawharad ah.
Waa tan Khayaanada Faallooyinka ee aan jeclahay maanta:
Waad salaaman tihiin. Waxaan bogaadinayaa degel aad u fiican. Waqti fiican ayaan kuugu hayaa adiga si aan u arko bisaddaada quruxda badan. Noocyo fara badan oo ku jira taranka.
Maxaan ugu jiraa BlogBurst?
Feb 23, 2007 markay ahayd 8:06 PM
Cawe .. Guumaysiga ayaa guulaystay! Weligaa ha dhayalsan awoodda 4 lugood oo duug ah.
Btw, waad ku mahadsantahay booqashadaada "bisad qurux badan!"
Feb 23, 2007 markay ahayd 8:11 PM
Adiguba bisado ayaa dhalaya! Ninyahow waxaad tahay cajaa'ib. Goormaad seexataa 😉
Feb 23, 2007 markay ahayd 8:28 PM
Hehe. Haddii ay dhacdo in qof walboo ka yaaban yahay Stumpy… waa tixraac zefrank dhawaan sheeko hurdo.
Zefrank waa mid kale oo ka mid ah farxaddayda dambiile.
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 2: 16 AM
Ma ka taxaddartaa inaad la wadaagto talooyinkaaga taranka?
Marka maxaad qabataa Qolka geli, xir, soo laabo dhamaadka maalinta iyo bam, 10 yar yar oo qurux yar oo qurux badan oo indhaha ku haya 🙂
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 8: 57 AM
Aad u qosol badan. Runtii waxaan haystaa Jack Russell oo aan u oggolaan doonin xayawaan kale oo nool gurigeenna. Dhibbanehiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ahaa shimbirtayada, Ozzy. Dhibanaha xigay wuxuu ahaa Gerbil wiilkaygu u iibsaday gabadhayda. Waa ugaarsade… dulqaad badan oo maskax badan. Weli waan jecel nahay isaga, in kastoo.
Febraayo 26, 2007 saacadu markay tahay 9: 04 AM
Faallooyinka SPAM qaarkood waxay noqon karaan wax lagu qoslo. Miyaad isku dayday inaad isticmaasho mid ka mid ah xisaabta faallooyinka spam ilaalinta? Waxaan ka helay iyaga oo aad waxtar ugu leh ka joojinta SPAM.
Waa tan kan aan isticmaalo:
Xisaab Comment Comment Spam.